Vatsigiri Vakawanda veZanu PF kuMasvingo Votsamwiswa naAmai Mugabe
Vatsigiri veZanu PF vekuMasvingo vanotsigira chikwata chinonzi chiri kuda kuti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika, VaEmerson Munangagwa, cheTeam Lacoste, kuti vatore chigaro chemutungamiri wenyika, vanoti havasi kufara nekubatwa kuri kuitwa mukuru wavo ne mutungamiriri wenyika, VaRobert Mugabe, pamwe nemudzimai wavo.
Vatsigiri ava vanoti kunyadziswa nekutukwa kwakaitwa VaMunangagwa pamwe nedunhu ravo na Amai Grace Mugabe kuBindura masvondo apfuura kunovarwadza uye kuchaita kuti vatambire bhora musango pasarudzo dzegore rinouya.
Vachitaura neStudio 7 vazhinji vanoti kunyange hazvo Amai Mugabe vachiti hakuna chikwata chinonzi G40, chikwata chinorwisana neTeam Lacoste, vanofunga kuti Amai Mugabe nevamwe vavo vari kuda kutora masimba ose munyika, uye kuti vabvise VaMnangagwa pamakwikwi ekuzotsiva VaMugabe kana vasiya chigaro.
VaLameck Chimbunde, avo vanotsigira Team Lacoste, vanoti havasi kuzosiya mukuru wavo achishungurudzwa, nokudaro vachasangana neG40 pasarudzo gore rinouya vachiti ndivo vane chaunga.
Mumwe mutsigiri waVaMnangagwa, Muzvare Sekesai Homba, vanoti kutsutsumwa kuri kuitwa muMasvingo nenyaya iyi, kuchaita kuti mutungamiriri wenyika, VaMugabe vashaye rutsigiro rwavo.
Nyanzvi mune zvematongerwe enyika, dzakaita sa VaUshe Murinde, vanoti kugumbutswa kwakaitwa vatsigiri va VaMunangagwa kuchaita kuti Zanu PF isare isina kusimba uye itorerwe zvigaro pasarudzo dze gore rinouya.
Dzimwe nyanzvi dzinoti Zanu PF ikaramba yakadai, ichatadza kutsvaira zvigaro zvose zvemuparamende makumi maviri nezvitanhatu sezvayakaita musarudzo dzemuna 2013.
VaMurinde vati izvi zvinogona kushandira zvakanaka divi remapato anopikisa sezvo Zanu PF isina kubatana sezvayakanga yakaita muna 2013.
Mukuru wevechidiki muZanu PF muMasvingo, VaNobert Ndaarombe, avo vanonzi mumwe weve Team Lacoste, varamba kutipa pfungwa dzavo nezvenyaya iyi vachiti inovapisa zvigumwe.
Asi mumwe kanzura wemuMasvingo anofungidzirwa kuti ndeve G40, VaGeshom Mundondo, vanoti zviri kutaura vamwe vavo hazvina maturo uye hazviiti kuti Zanu PF ikundwe musarudzo gore rinouya.
VaMugabe vakatodoma komiti huru yeZanu PF ichange ichitungamira sarudzo. Komiti iyi ine vanhu vashanu vanoti munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZanu PF, VaIgnatius Chombo, munyori wezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, murongi wemisangano, VaSaviour Kasukuwere, munori wezvechidiki, VaKudzai Chipanga, pamwe nemunyori wezvemadzimai, Amai Grace Mugabe.
Pavashanu ava, VaChinamasa chete ndivo munhu asinganyatsozivikanwe kuti akamira papi kunyange hazvo vamwe vachiti vakarerekera kuTeam Lacoste. Vamwe vose vana ava vanozivikanwa kuti ndeve G40.
Vatsigiri veTeam Lacoste vanoti veG40 vanoda kubvisa VaMnangagwa kuitira kuti pasarudzo dzegore rinouya vaise vanhu vavo vachakwikwidzana nemamwe mapato pazvigaro zveparamende nemakanzura.
Asi vanoti izvi zvikaitika, havasi kuzovhotera vanhu vanenge vaiswa pamwe naivo VaMugabe vacho, izvo zvichaita kuti vakundwe zvine mutsindo kudarika zvavakaitwa muna 2008.